Ukukhiqizwa yesimanje ka ukudla kuqedile ngaphandle kokusebenzisa nezivimbelakuvunda ahlukahlukene, thickeners futhi ukunambitheka enhancers. Uma sikubeka kalula, ukudla okufakiwe likhona cishe zonke umkhiqizo sibona emashalofini. Njengomthetho, buzani ukutholakala a okuphothula ethile mayelana akunzima, ngoba abakhiqizi ungangifihleli lutho kusukela umthengi. Uhla oluphelele lolwazi izingxenye umkhiqizo kuboniswa kwi isembozo, njengoba ibhekwa wezokudla kuboniswa anekheli incwadi nenombolo enamadijithi amathathu.
It is etholwe ngemishini futhi eziqukethwe ukudla ukuze kwelulwe isikhathi isitoreji, izinguquko isakhiwo noma ukunambitheka kwako izici. Abantu abaningi bafanisa i welithi "ukudla engeza" futhi "ibhekwa wezokudla." Lokhu kusuke okungalungile, njengoba ibhekwa wezokudla, ngakho esibizwa BAA kuyinto eziyinkimbinkimbi amaminerali ehlukahlukene, amavithamini kanye nezinye izakhi. Nezithasiselo zivame ukuthathwa kalula ukudla nokwenziwa yayo ezinhle kakhula neze bazogcwalisa umzimba ne izakhi mkhondo ebalulekile.
izithasiselo Ukudla akumele ifake excipients, okuyinto kabanzi umsebenzi ezimbonini. Phakathi kwalezi kuthathwa ngokuphepha ukuthi amadivayisi asetshenziswe ukuhlanzwa noma ukucaciseleka komkhiqizo. Okusho ukuthi zisetshenziselwa ukuthuthukisa inqubo kanye ukuthola umkhiqizo kangcono, ngaphandle kokushintsha ukunambitheka kwako zemvelo.
Kuze kube manje, akunakwenzeka ukuba sicabange imisebenzi zokukhiqiza ukudla ngaphandle ukufakwa thickeners, zombala nezinye izinto zibe impahla. Nsuku zonke athuthukile izithasiselo entsha ethuthukisiwe lesekela ephelele umkhiqizo ukubukeka isikhathi eside, sibe sihlala palatability.
Phakathi ezihlukahlukene lwezakhamzimba ungabahlukanisa:
Lubhekele ubukeka amahle izici ukunambitheka-esaziwa;
Okubizwa ngokuthi nezivimbelakuvunda, okuyinto banesibopho ukuphepha microflora;
Nambithani eyigeza komkhiqizo alondolozwa imibala, flavour, izinto okuyinto ukushintsha ukunambitheka bomsebenzi izimpahla, isibonelo ukudla engeza "Crystal". Nezivimbelakuvunda ukusiza ukwakha ibhoduluko ekhethekile microbial enikeza ukulondolozwa kakhulu umkhiqizo ngokuhamba kwesikhathi. Kungenzeka umsuka zamakhemikhali noma zamagciwane abulalayo. Ngu izithasiselo ngenkuthalo lisetshenziswe ukukhiqizwa zihlanganisa ezintweni ezihlukahlukene ikhukhumala, amakhorali amanxusa, ejenti gelling, nezinye izenzo ezifanayo.
Emit omningi ukungcola we orientation ezahlukene. izinombolo zabo zibe nezihloko kuka-500. Ukuze alawule ukudla okufakiwe ngalinye lalithola yakho siqu inombolo kamazisi, ehlanganisa amadijithi amathathu noma amane.
Kukholakala ukuthi ayingozi kakhulu ukudla okufakiwe lisetshenziswe umsebenzi zokukhiqiza. Eqinisweni ukungcola ezivezwa zokwenziwa izindlela, hhayi njengoba elimazayo njengoba kubonakala. Ngemva kwalokho ngamunye ngaphambi kokukhululwa kwe ekukhiqizweni egcina umjikelezo abacwaningi eside futhi ukuhlolwa, okuyizinto ukwazile ukwambula ngokugcwele ukukhinyabezeka kwayo empilweni yomuntu. Uma Kutholwe ngisho ukuphambuka kancane kusukela kuyinsakavukela, ngeke ivunyelwe ukusetshenziswa ekucubungululeni ukudla imisebenzi.
Zonke Izithako ayesanda kuklanywa certified amasheke inkonzo yabo kazwelonke wezempilo ukuze ingozi umzimba womuntu. You azi ukuthi ukudla okufakiwe ngalinye exhumene ezithile amazinga kanye nokudingekile ukuthi kukhona ngisho kuqine kakhulu ahlinzekwa emithi.
Yini amavithamini ezikahle baphuze ekwindla? Amavithamini ekwindla: Izincomo
Indawo lapho Omsk - eNtshonalanga yeSiberia
Apotheosis - kungcono njalo omkhulu!
"ER-6 Pro (sounder) Practitioner": libuyekeza abadobi, ukubuyekeza kanye Ukucaciswa